Izingane zishaya phansi
Ingane engaphansi konyaka owodwa ihlale ijwayele izifo zamehlo ezihlukahlukene. Ngisho nangesikhathi sokubeletha umntwana angabamba isifo kumama wakhe. Ngakho-ke, ukuze kuvinjelwe ingozi yokutheleleka, odokotela esibhedlela sokubeletha bawela izidakamizwa zokulwa namagciwane emehlweni abantwana. Izingane eziningi ngokuvamile zizalwa ngamacu ezincane noma ezingenakunyakaziswa. Isigaba esinjalo sezingane ezisanda kuzalwa sisengozini kakhulu, ngoba isakhiwo samehlo abo siholela ekuqhumeni kakhudlwana kwenqubo yezinyembezi nokuvuvukala. Kukhona nje indlela yokuyenza ngaphandle kwamaconsi akhethekile.
Izinsana emva kwezinyanga ezingu-6, njengabanye, zivezwa izifo zeso ngenxa yokungena njalo kwezifo ezithathelwanayo. Ungakwazi kanjani ukuxilonga izifo zeso ngesikhathi somntwana nokuthi ungakhetha kanjani amaconsi angokwelashwa efanele? Ukuthi noma yikuphi ukwelashwa okumelwe ukhethe udokotela akungabazeki, kodwa yiziphi izibonakaliso zokuqala abazali ezikhomba ukuthi isifo seso:
amehlo omntwana ahluma
ingane ikhononda ngokuhlunguphazwa okuqhubekayo ku-orbit
ubona esweni inhlayiya yangaphandle
i-lens yengane ishicilelwe, futhi izitsha zikhuliswa ngokuphawulekayo.
Iso lezingane ezivame kakhulu liyehla
Uma isifo somntwana emntwaneni asinzima kakhulu futhi sisuswe kalula (injini encane, ukucasula okuncane noma ukubandayo), khona-ke kuyoba ngokwanele ukusebenzisa amaconsi eso njengetetracycline noma i-albucid. Uma ubuhlungu emehlweni - umphumela wesilonda esiyingozi kakhulu, khona-ke amaconsi athandwayo kakhulu azoba ama-vizin, tobrex noma tropicomide.
Iso elisekelwe njalo kunazo zonke liyehla ngenxa yezingane zi-atropine. Kufanele isetshenziswe ngokuqapha okukhulu, ngoba lesi sidakamizwa singakwazi ukuphumula ngokushesha imisipha ye-longitudinal. Lokhu kunomthelela ekwelapheni i-strabismus noma kuqeda lokho okubizwa ngokuthi "ivila iso" syndrome.
Kunezinhlobonhlobo ze-antibacterial eyehla ezinconyweni ezingavunyelwe ukusetshenziswa ngabantu abangaphansi kweminyaka engu-18 ubudala. Iningi lezidakamizwa ezinjalo azihlolwanga nje izingane ezivela kuleli qembu lobudala. Uma kunesidingo, ungakwazi njalo ukukhetha i-analog esebenza ezinganeni zanoma yimuphi ubudala. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, amaconsi asetshenziswayo, ngokuvamile avunyelwe izingane ezincane, ngokuvamile akavunyelwe ukusetshenziswa kuze kube yiminyaka engu-15. Kungcono ukufaka esikhundleni sabo nge-torbeks, evunyelwe ukusetshenziswa kusukela usana.
Iziphi izifo ezivimbela amaconsi asehlo?
Ngosizo lwamaconsi ejoka kungavimbela izifo eziningi, "zicasuliwe" yi-bacterial or infection. Isifo esivame kakhulu esibuthinta amehlo entsana yi-dacryocystitis. Kuyinto evamile kakhulu ezinsaneni ezinezinambuzane ezingenazo izinkinga (imbangela evelele kakhulu yesifo yi-gelatinous "stopper"), okubangela ukwephula ukuphuma kwezinyembezi.
Amaconsi ejoka ezinganeni
Yiqiniso, kulezi zinsuku ukuqubuka kwamaconsi kwezingane kubanzi, zikhiqizwa ngabakhiqizi bezinye izizwe nabangaphakathi. Noma kunjalo, amaconsi anjalo kufanele ahlale ephephile futhi enzima kakhulu. Ukubunjwa kwabo, okungenakusho ngamanani, akufani neze. Ngokuvamile, izixazululo ezingu-10, 20 no-30 ze-sulfacyl sodium ziqiniswe nge-sodium thiosulfate ne-hydrochloric acid ehlanzekile zisetshenziswa njengamaconsi, kanye namaphesenti angu-3 = amaphesenti e-collargol.
Indlela yokungcwaba kahle ingane yengane
Lapho ihlumela lilindele "umhlangano" ngeso lengane, iphuzu le-pipette kufanele livimbele njalo ama-eyelashes ekuthinteni. Sebenzisa ama-pipettes alulayo kuphela. Imfundo yesinyathelo-by-step yokugxilisa amehlo kwezingane kanje:
Geza izandla zakho zihlanzekile futhi uqinisekise ukuthi amehlo omntanakho nawo ahlanzekile. Uma kungenjalo, sebenzisa i-swab yekotini ukuze ususe ukungcola ekuqondeni kwempumu.
Shake the vial ngamaconsi. Ngaphandle kokungabaza okuncane mayelana nesicelo, funda imiyalelo.
Beka umntwana endaweni ekhululekile. Kungcono ukubeka umhlane wakho emuva. Uma ingane encane kakhulu, kungcono ukuyibeka eceleni - ngakho izandla zakhe nezinyawo ziyoba endaweni ezolile.
Ngokucophelela, kodwa ngokushesha ngangokunokwenzeka, wehlisa ijwabu leso elincane. Bese ugoba ibhodlela lemithi bese ucindezela ukudonsa okunye phezu kwejwabu leso eliphansi. Ungathinti amehlo wengane ngezingxenye ze-vial.
Ungavumela ukuhamba kwejwabu leso elincane - ake ingane ibonakale. Ngakho lo muthi uzosatshalaliswa ngokulinganayo ngaphakathi kweso.
Phinda uma kunesidingo, uma udinga ukuvuza amaconsi ambalwa. Sula okusele kwamaconsi ngendwangu ehlanzekile.
Uma udinga ukwehla amaconsi ezinhlobo ezimbalwa ngesikhathi esisodwa, kufanele ulinde okungenani imizuzu emihlanu ngaphambi kwenqubo elandelayo.
Izinkinga zezempilo zezingane
Indlela yokunciphisa ngokuphepha isisindo somntwana?
Ukwelashwa kwe-amblyopia ezinganeni
I-Acetone emcinini kubantwana
Ukushaya kwenhliziyo okuqinile kwengane
Indlela yokukhulisa ingane enempilo ephikisana nombono odokotela?
Indlela yokwenza umntwana athathe imithi?
Imithetho yokuthandana nomfana ku-intanethi
Kungani kufanele futhi ngishintshe kangaki ibhulashi lami lamazinyo?
Ikhalenda lokukhulelwa: amaviki angu-37
Incwadi ethandwayo yephupho: ukuchazwa kwamaphupho mayelana nomama okhulelwe
"Hamba ngemoto!" Noma iziphi izicathulo okufanele uzigqoke entwasahlobo ka-2015. Izithombe zezicathulo ezifashisayo kakhulu
Ulimi lwengulube olunomsindo
Vula i-pie nge-saury namazambane
I-Cutlets e-pastry yokudla
Amafutha omnqumo ngobuhle
Uyini uthando lomntanakho?
Imikhiqizo emihlanu ephezulu yesifo sikashukela
Ukubukeka okhathele - indlela yokusiza amehlo okhathele
Kungani iphupho lokubanga. Zonke izincazelo
Kungenzeka yini ukuthi uqaphele i-Down's syndrome ngemuva kokuzalwa kwengane